Brezila: naborak’ireo mpanohitra ny fanalàna zaza ho hita an-tambajotra ny momba ny zazavavy kely iray niharan’ny fanolànana · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroka ho an'ny vevivavy, nihetsika nanohana ilay ankizivavy
Voadika ny 16 Septambra 2020 11:57 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, عربي, русский, Français, English
Fihetsiketsehana fitakiana ny zon'ny vehivavy, teo anoloan'ny toerampitsabaoan tao Recife, ao amin'ny fanjakana Pernambuco. Sary an'i Denilson Cadete, nahazoana alàlana taminy.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amin'ny lahatsoratra amin'ny fiteny pôrtiogey ny rohy rehetra.]
Tapatapaky ny volana Aogositra, ankizivavy 10 taona, niharan'ny fanolànana, no ivon'ny adihevitra momba ny zo amin'ny fanalàna zaza ao Brezila, taorian'ny nanaborahan'ireo media sôsialy ny anarany sy ny toerana misy ilay hôpitaly tokony niatrehany ny fanalàna zaza mifanaraka amin'ny lalàna.
Ny 7 Aogositra io ankizivavy io dia tonga tao amin'ny hôpitaly tao São Mateus [angl], ao amin'ny fanjakana breziliàna Espírito Santo, rehefa naharary azy ny kibony. Nohamarinin‘ny fitiliana fa bevohoka izy. Herinandro taorian'izay, nomen'ny Fitsaràna ao Espirito Santo alàlana ny hampiatoana ilay fitondràny vohoka, noho izy io vokatry ny fanolànana.
Ny andininy faha 128 amin'ny lalàna famaizàna ao Brezila, voasoratra tamin'ny 1940, dia manisy fanamarihana manokana toy ny hoe « ny fanalàna zaza ilaina atao » sy « ny fanalàna zaza vokatry ny fanolànana », amin'ny fanomezana alàlana ny dokotera hampitsahatra ilay fitondrana vohoka, tsy hatahotra fanenjehana araka ny lalàna. Omen'ny fanapahana iray navoakan'ny Fitsaràna Federaly alàlana ihany koa ny fanalàna zaza raha toa misy tsy fahatomombanan'ilay zaza vao mitsaika (anencéphalie du fœtus) [fr].
Araka ny nambaran'ilay ankizivavy, nanomboka tany amin'ny faha-enina taonany no efa nanolana azy ny dadatoany, ary nandrahona azy tsy hilaza na inona na inona. Nampangain'ny polisy sivily ao amin'ilay fanjakàna ho nanao fanolanana ary nosamborina tamin'ny 18 Aogositra ilay voampanga, 33 taona.
Noho ny vohoka efa lasa aloha loatra entin'ilay ankizivavy, dia nilaza ny hôpitaly Vitoria, ao an-drenivohitr'i Espirito Santo, fa tsy ananan-dry zareo ao ny fahafahana ara-teknika ho entina manatontosa ilay fanalana zaza ka dia nafindra tany amin'ny hôpitaly ao Recife, 1600 km miala eo, any amin'ny fanjakan'i Pernambuco, avaratra-andrefan'ny firenena, ilay ankizivavy. Teo anelanelan'ny 16 sy 17 Aogositra, notairina tao amin'ny hôpitaly CISAM-UPE ny ‘fahafahan-jaza’ (fausse couche). Ny CISAM-UPE dia manana fahaizana manokana momba ny fitondrana vohoka saropady sy ny fanarahana maso ny vehivavy. Ao Brezila, klinika 42 ihany amin'izao fotoana izao no afaka mandray an-tànana io karazana tranga io, raha ny voalaza ao amin'ny sarintanin'ny fanalàna zaza mifanaraka amin'ny lalàna.
Na eo aza ireo ezaka ataon'ny manampahefana mba hiantohana ny maha-tsiambaratelo ny dingana fanalàna zaza mifanaraka amin'ny lalàna, ilay mpikatroka avy amin'ny farany havanana sady mpomba an'i Bolsonaro, Sara Giromini (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Sara Winter), dia namboraka tety anaty media sôsialy ny anaran'ilay ankizivavy sy ny adiresin'ilay hôpitaly. Nitarika olona marobe manohitra ny fanalàna zaza hitangorona teo anoloan'ilay hôpitaly izany.
Ny 16 Aogositra, nisy mpitsara iray nanome 24 ora ho an'ny Google (YouTube), Facebook ary Twitter mba hanalàn-dry zareo ireo votoaty tena faran'izay manohintohina ilay ankizivavy 10 taona voaresaka. Ny 19 Aogositra, nambaran'ny Twitter ny fampiantoany ny kaontin'i Sara Giromini.
Na teo aza ny fanamafisan'i Sara Giromini, nilaza hoe efa niparitaka tao anaty aterineto ny torohay rehetra mahakasika ilay ankizivavy, nitakian'ny fampanoavana vola 1,3 tapitrisa reals breziliàna ihany izy (eo amin'ny 230 000 dolara amerikàna) ho onitra sy tataon-tsazy.
Niasa tao anivon'ny ministera misahana ny Vehivavy, ny Fianakaviana ary ny Zo maha-olona i Sara Giromoni hatramin'ny faran'ny taona 2019, tao anatin'ny governemantan'i Bolsonaro, teo ambany fitantanan'i Damares Alves. Damares Alves, izay sady pastora evanjelika, dia nanaraka akaiky ny raharahan'ilay ankizivavy, ary naniraka solontena tany Espírito Santo, mba hahalala misimisy kokoa momba ireo fanadihadiana natao. Nolavin'ny ministera ny hoe nanaparitaka ireo torohay momba ilay ankizivavy. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety Allan de Abreu, taorian'ny fitsidihana tao São Mateus nataon'ny andiany iray avy amin'ny ministera, nandeha tany amin'ny toeram-ponenan'ilay ankizivavy 10 taona ireo mpikatroka mpanohitra ny fanalàna zaza mba hanao tsindry amin'ny renibeny hanakana ilay fanalàna zaza :
Taorian'ny fitsidihana tany São Mateus nataon'ny andiany iray avy amin'ny ministera, sy solombavambahoaka iray avy amin'ny antenimieram-panjakana, lasa toy ny toerana fanaovana fivahinianana masina ho an-dry zareo katôlika, envanjelika ary ireo pôlitisiàna mpomba an'i Bolsonaro, izay samy manohitra ny fanalàna zaza avokoa, ny trano fonenan'ilay ankizivavy sy ny renibeny. Nanao tsindry tamin'ny reniben'ny zaza izy ireo mba handreseny lahatra ny zafikeliny hitazona ilay zaza ao am-bohoka.
Walmor Oliveira de Azevedo, filohan'ny kaonferansa nasiônalin'ireo eveka ao Brezila, dia nandray ilay fampitsaharana ny vohoka nentin'ilay ankizivavy folo taona ho toy ny « heloka maharikoriko ». Tety anaty media sôsialy, nandefa hafatra iray izy milaza hoe:
Mampivarahontsana ny herisetran'ny filàna ara-nofo, ekena, saingy tsy manamarina izany ny herisetra fanalàna zaza, raha jerena ireo loharanon-kevitra rehetra misy mba ho fanavotana ny ain'ireo zaza roa. Ny tsy firaharahiana, ny fahanginana ary ireo antso nalefa ho amin'io herisetra io dia ilàna fisaintsainana lalina momba ny fiforonan'ny atao hoe olombelona.
Raha ny fiantraikan'ny fitondràna vohoka tsy niriana eo amin'ny fahasalamàn'ny vehivavy iray no jerena – na amin'ny vatana izany na amin'ny saina – mihamafy mankany amin'ny filàna mandraikitra ny fanalàna zaza mifanaraka amin'ny lalàna ho toy ny singa iray tsy maintsy araikitra amin'ny zon'ireo vehivavy ny adihevitra.
Debora Diniz, mpahay momba ny olombelona, mpikaroka sady mpikatroka ho amin'ny tsy fanaovana ny fanalàna zaza ho toy ny heloka, dia nanoratra tao anatin'ny lahatsoratra isanandro fanaony ho an'ny gazetibokim-behivavy Marie Claire, fa tsy afaka ho atao ny sady mpikatroka ho an'ny vehivavy no koa ho mpanohitra ny fanalàna zaza:
… tsy azo eritreretina mihitsy ny ho sady mpikatroka ho an'ny vehivavy ianao no sady hanamarina ny fampidirana am-ponja ho toy ny vintan-dratsy ho an'ireo vehivavy niditra tamin'ny fanalàna zaza, izay hoe “manohitra ny fanalàna zaza”. (…) Teneniko ny hoe “manohitra” na “manaiky” ny fanalàna zaza, ho entiko fotsiny manamora ny fifampiresahantsika. Tsy lohahevitra iray ny fanalàna zaza ka hoe hipetrahanao amin'ny lafy ankilany na andaniny amin'ny zavamarina – safidy tena madiodio sy manokana an'ny vehivavy tsirairay io. Angamba mety tsy hanao fanalàna zaza velively ianao, saingy amin'ny maha-mpikatroka ho an'ny vehivavy no hianaranao ny manaiky ireo vehivavy miaina zavatra hafa noho izay nolalovanao.
Tao amin'ny Twitter, ireo vondrona mpomba ny safidy dia nampiseho ihany koa ny fanohanany ny ain'ilay ankizivavy 10 taona, tamin'ny alàlan'ny tenifototra #GravidezAos10Mata (« vohoka amin'ny faha 10 taona, mahafaty», amin'ny fiteny pôrtiogey).
Nandeha nankany amin'ny hôpitaly ireo vehivavy avy ao amin'ny Donakafon'ireo Vehivavy ao Pernambuco mba hiaro ny ain'ilay ankzivavy 10 taona, nitondra vohoka taorian'ny nanolanan'ny dadatoany azy.
Ireny olona ireny no mpiaro aina ! #Vohoka10TaonaMahafaty
Taorian'ny namborahana ny raharahan'ilay ankizivavy folo taona, namoaka tarehimarika mampivadi-po momba ireo trangana herisetra atosiky ny filàna ara-nofo zakain'ireo tsy ampy taona ao Brezila ireo media. Manodidina ny enina isanandro ny fanalàna zaza voarakitra ao amin'ny firenena, ho an'ireo ankizivavy eo anelanelan'ny 10 sy 14 taona, nitondra vohoka taorian'ny fanolanana, araka ny nambaran'ny BBC. Amin'ny tranga sasany, nisy ny naiditra hôpitaly taorian'ny fahafahan-jaza nanjo azy na ny nanandramany nanala zaza tany an-tokantranony.
Tamin'ny 2018, araka ny hita ao anatin'ny alimanaka 2019 momba ny fiarovana ny daholobe ao Brezila [pdf], isan'ora dia efatra raha kely indrindra ireo ankizivavy 13 taona niharan'ny fanolanana. Ny angondrakitry ny ministeran'ny fahasalamàna dia milaza fa raha kely indrindra dia 32.000 ireo ankizivavy no niditra tamin'ny fanalana zaza tao amin'ny firenena, hatramin'ny 2008.